Qodida Raxmada Crawler Ee Ka Soo Baxday Libherr | MAKIINADDA ACE
R940 Crawler Excavator Laga soo bilaabo Libherr
France R&D iyo xarunta wax soosaarka ayaa hada dhameeyay mashiin cusub –R940 Crawler Excavator oo ah alaabtii ugu dambeysay ee taxanaha R 944C
Ka faa'iideysiga khibradda hodanka ah ee laga helay Libherr, mashiinka cusub wuxuu leeyahay awood shaqo oo wanaagsan, taasna waxay dhisi kartaa heer cusub oo loogu talagalay qodista soo socota. Sababtoo ah mashiinkani wuxuu wax badan ka qaban karaa deegaanka. Mashiinkaas oo waliba ku daraya maran R950 iyo taxanaha R960 wuxuu ku habboonaan karaa meel dumin badan.
Qalabkan mashiinka cusub ee EU-5 ka bixida caadiga ah. Heerka waxsoosaarkuna wuxuu gaari karaa 200KW, isla waqtigaasna wuxuu leeyahay DOC, SCR sytem, ​​DPF oo ka soo deji waalka EGR. Dhamaan qalabkaasi waxay sameyn karaan keydinta shidaalka waxayna ilaalin karaan Mashiinka. Ka sokow, waxay bixin kartaa nooca Tier 4 Final. Ugu dambayntii, Libherr waxay u fidisaa mishiinka isku lammaan suuqyada qaaska ah.
Halkan waxaa ku yaal hal qayb oo muhiim ah LDC, Iyada oo la raacayo qalabka dayactirka ee badbaadada, Darawalku wuu ogaan karaa booska mashiinka iyo meesha dusha, haddii ay jiraan wax khatar ah LDC ayaa heli doonta farriinta ka dhigaya darawalka inuu ogaado.
Isla mar ahaantaana qolka Darawalka wuxuu sameeyaa hagaajin dheeri ah sida jiiska Hawada, iyo saxanka miisaanka miisaanka leh ee la saari karo. Darawalku wuxuu kaloo isticmaali karaa kombaresarada hawada si uu u sameeyo hawo nadiif ah qolka.
Mashiinkan cusub ayaa laga yaabaa inuu dib u dhiso heerka istaandarka qashin-qubka.
Waqtiga boostada: Oct-21-2020